‘Akubona bonke abaSotho abagqoka ingubo abangabantu ababi’ | Scrolla Izindaba
‘Akubona bonke abaSotho abagqoka ingubo abangabantu ababi’
Ezindaweni ezinenkinga e-West Rand eGauteng, a-Basotho – abaziwa ngokugqoka izingubo – bavele bazotshela umphakathi ukuthi izingubo zabo azibenzi abantu ababi.
Abahlali abaphelelwe yithemba basemalokishini ase-Tambo, eMandela, e-Spooktown nase-Silver City besatshiswe ngamaqembu ezigelekeqe iminyaka eminingi.
Omunye ugobela ongumoSotho ohlonishwayo futhi oziqhenyayo ushiye amathambo akhe kanye nendumba ukujoyina omakhelwane emzameni wokubumba iqembu elizolwa namaqembu a-Basotho ezigelekeqe.
UGobela Mmathabo Thokoa ulilizele watshela isixuku e-Tambo Section, e-Bekkersdal, ngoLwesithathu ukuthi impimpi phakathi kwabo kumele yazi ukuthi abasakwazi ukucasha.
“Ngikhathele ukuzwa umndeni wa-Basotho kanye negama lokhokho lingcoliswa yigazi labantu abangenacala. Ngiholwa okhokho bami, ngikulungele ukulwa nanoma ngubani obeka igama le-Sesotho ehlazweni,” uyasho.
“Abantu babheka wonke umuntu ogqoke ingubo njengelungu leqembu lezigelekeqe ze-Basotho, kodwa ubugebengu abufaki igama lomndeni. Kumele sibikele amaphoyisa lawo macala okumele abhekane nawo. ”
UThomas Ndlovu utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi sonke isakhamuzi sinikele ngemali eyi-R5 ukuthenga izimpempe. Bazoshaya izimpempe noma nini lapho umuntu enenkinga ukwazisa umphakathi ozofika uzosiza.
UThomas uthe isikhathi esibi kakhulu sosuku kusebusuku lapho abantu bebukele umabonakude.
“Yilapho abagadla khona. Yilapho ubona izinhlamvu ezindiza emijondolo,” kusho uThomas.
Umholi womphakathi futhi oyilungu lekomidi lesigceme le-ANC, uGaddafi Ncele uthe abantu akumele bavumele abantu abangabazi bangene emakhaya abo ngoba labo bantu bayabajikela bababambe inkunzi.
“Kumele sibumbane futhi sibambisane silwe namaqembu ezigelekeqe,” kusho uNcele.
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala [email protected].org.za noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za